Ihe anyi n’eme | Li Tim-Oi Foundation
Ughmụ nwanyị LTOF
Okwukwe Grace Alidri
Deborah Adut David
Onye isi ndu
Onye bụbu Patrons
Akụkọ Li Tim-Oi
Olee otú Iji Mee
Ikwusi umunwanyi ndi Kristian dika ndi ngbanwe
Li Tim-Oi Foundation dị iji kwado ndị inyom Christian dị ka ndị nnọchi mgbanwe n'etiti ọdịbendị ha. Ntọala ahụ na-enye onyinye maka ụmụ nwanyị na-aga ime n'ọchịchị Nnukwu towa ka ha zụọ maka ọrụ na ozi Ndị Kraịst, yana ọtụtụ ụdị ọrụ ndị ọzọ, gụnyere dị ka ndị ndụmọdụ na-agụ akwụkwọ ọgụgụ, ndị ọrụ obodo, ndị ọrụ ahụ ike, ndị isi ego na ndị na-akụzi nkà mmụta okpukpe.
Mgbe Florence Li Tim-Oi, nwa agbọghọ nta ndị nwanyị China, chọrọ ịmụ maka ozi ahụ, ezinụlọ ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ ihe ọmụmụ ahụ na Union Theological College dị na Guangzhou (mgbe ahụ Canton). Ndị ọzọ nyere ya ego iji mee nke ahụ. Na ncheta ya, nwanne nwanyị Florence Rita mere ka enwee ike Ntọala ahụ, ka a wee zụọkwa ụmụ nwanyị Ndị Kraịst ndị ọzọ na ọtụtụ ụwa, dịka Florence, ka ha wee rụọ ọrụ ha. Ha na-akpọ onwe ha 'Ughmụ nwanyị Li Tim-Oi'.
Echichi na Diocese Anglican nke Hong Kong na South China mere na obodo Free China nke Shui Hing n'oge Agha Sino-Japanese. Ọ bụ Bishop RO Hall na-eduzi ya ka Ndị Kraịst Anglịkan na parish Tim-Oi nke Macao, ógbè ndị agwaetiti Portuguese, nwee ike ịnata oriri nsọ nke Oriri Nsọ.
Ọ bụ rue 1971, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ mgbe nke ahụ gasịrị, na Nkwukọrịta Anglịkan kwenyere na mpaghara ọ bụla nwere onwe ha ikpebiri onwe ya n'okwu gbasara ịkpa ụmụ nwanyị. Ọ bụ rue n'afọ 1994, n'ime afọ 23 ọzọ ka enyere ụmụ nwanyị ka ha bụrụ ndị ụkọchukwu na aska England. N’otu afọ ahụ ka emepụtara Li Li-Oi Foundation.
Kedu ihe kpatara 'Li Tim-Oi' Foundation?
Ntọala ahụ na-echeta ndụ na ozi Revd Dr Florence Li Tim-Oi bụ onye e mere 'Prikọchukwu na Churchka Chukwu' na 25th Jenụwarị 1944. Nke a mere ka ọ bụrụ nwanyị mbụ e chiri echichi n'ime ọgbakọ Anglịkan.
Na Jubili ọla edo nke ụkọchukwu Li Tim-Oi, Achịbishọp nke Canterbury n’oge ahụ, bụ Donald Coggan, malitere ụlọ ọrụ Li Tim-Oi na St Martin-in-the-Fields Church, na Trafalgar Square, London.
Site na mgbe ahụ, Foundation enyela onyinye karịa ụmụ nwanyị 450 si dioceses 124 na mpaghara 14 nke Anglịkan Communion, gụnyere Africa, Brazil, Fiji, India na Pakistan.
Ihe ruru ụmụnwaanyị 250 bụ ndị e chiri echichi dịka ndị ụkọchukwu Anglican ma ọtụtụ n'ime ndị ọzọ azụọla ha maka ọrụ site n'aka ndị dayọsis ha n'ọkwa dịka ọkwa ego, onye nlekọta, onye ndụmọdụ agụmagụ agụmagụ, ndị ndụmọdụ banyere ọrịa AIDS, onye nyocha, onye nkuzi kọleji, onye ode akwụkwọ bishọp, nwanne nwanyị Church Army, onye Katọlik, onye ụkọchukwu, onye ọrụ nkwukọrịta, onye ọrụ obodo, onye na-azụ kọmputa, onye ndụmọdụ, onye ọrụ mmepe, odeakwụkwọ diocesan, onye nkwusa ozioma, nọọsụ ahụike, onye ọrụ mgbasa ozi, onye ọka iwu, onye nkuzi, onye ndụmọdụ gbasara iwu, onye na-echekwa microcredit, onye ọrụ mmepe ndị otu nne, onye na-ahụ maka udo na imekọrita , onye nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị, ụkọchukwu ụlọ mkpọrọ, onye na-ahụ maka ịzụrụ ihe, odeakwụkwọ mpaghara, ụkọchukwu ụlọ akwụkwọ, onye na-elekọta mmadụ, onye ntụgharị okwu, onye ọrụ ntorobịa.
Enweghị nkwado nke Foundation, ha agaraghị enwe ike ịrụ ọrụ ha iji wee rụọ ọrụ ndị a na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado ọrụ nke Foundation, nye onyinye Ebe a.
Otu anyị si arụ ọrụ
N’oge na-adịbeghị anya, Li Tim Oi Foundation chọpụtara na ọ dị mkpa ịtụgharị ntuziaka mbụ ya, nke mbụ mebere afọ 25 gara aga, iji gboo mkpa ụmụ nwanyị taa. Anyị na-enye ndị inyom ego naanị n'ọtụtụ ụwa, nke a makwaara dị ka ụwa nke abụọ n'ụzọ atọ, n'ihi na ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị ka na-enwe ịkpa ókè na ajọ mbunobi n'ọtụtụ ọdịnala, a naghị enyekarị ha ohere agụmakwụkwọ dị ka ụmụ nwoke na ụmụ nwoke.
Anyị na-enye onyinye maka ụmụ nwanyị so na Chọọchị Anglịkan, ma ọ bụ nke ụka na Chọọchị Anglịkan zuru ụwa ọnụ. N’agbanyeghi na enwere ndi nwanyi n’otu ndi Kristian nile choro nkwado maka ozuzu, anyi kwenyere na anyi buru uzo kwado ndi nwanyi n’ime nmekorita nke anyi. Anyị ghọtara na ụmụ nwanyị ahụ n'onwe ha na-agakarị ume ma na-emetụta ụmụ nwanyị sitere na ụlọ ụka ndị ọzọ na okpukpe ndị ọzọ, mana anyị kpebisiri ike ịkwụsị njedebe nke nwoke na nwanyị na ịkpa ókè n'ofe Anglịkan.
Anyi choro nkwa nke Bishọp nke diocese ebe a ga-enweta nwanyị na-arụ ọrụ. Nke a bụ iji gbaa ndị isi ọgbakọ Anglịkan ume ka ha mata onyinye na nha anya ụmụ nwanyị nọ na Nzukọ na ọha. Anyị na-atụ anya ka a họpụta ụmụ nwanyị ahụ n'ọnọdụ ndị isi, ebe ha ga-enwe nnukwu ọrụ na ndụ nke diocese. Anyị nwere ọtụtụ ihe akaebe na ụmụ nwanyị ndị a na-enwe mmetụta dị ukwuu na chọọchị ha na ọdịbendị ha, nakwa na ha na-enyere aka ịkwụsị njedebe na omume na ọdịnala ndị na-emebi ihe. Iji maa atụ, ụmụ nwanyị na-aga n'ihu na-ekwu okwu megide ime ihe ike dị n'ezinaụlọ, na - ebi ugwu ụmụ nwanyị, omume mmekọahụ na - adịghị mma na omume ndị ọzọ na - emerụ emerụ na mbibi. Site na nkuzi na iduzi ha, umu nwanyi na - agbanwe, ma na - azoputa, otutu ndu.
Onyinye ego anyị bụ maka ọzụzụ aka ọrụ, mana n'ọnọdụ puru iche, anyị ekpebie inye onyinye maka ụmụ nwanyị ka ha wee nweta asambodo agụmakwụkwọ ọzọ. N'ụdị oge a, ọ nwere ike bụrụ ihe ga - akacha mma ka ị chọọ nkwado nke onye gụrụ akwụkwọ, karịa bishọp nwanyị. N'ọtụtụ mba, ma na ụlọ ụka ma n'ụlọ ọrụ, ụmụ nwanyị na-agbadata n'azụ ụmụ nwoke ibe ha dịka a na-eleghara ha ohere maka ọzụzụ na mmepe.
Ebe anyị kwenyegogo ihe mbido mbụ, ma na-agakwa ịkọ akụkọ banyere afọ ojuju na-eju afọ, anyị na-agba mbọ na-eme ka inyeghachi ego ugboro ugboro kwa afọ rue mgbe a ga-agwụcha akwụkwọ ahụ. Onyinye ego anyị na-akwụkarị bụ maka ihe ruru £ 1200 kwa afọ ma akwụ ụgwọ ya na ngalaba ọzụzụ. Ọ bụrụ na onyinye anyị anaghị ekpuchi ụgwọ ọrụ nke ihe ọ bụla, anyị na-agba mbọ hụ na nwa akwụkwọ nwere ike wezuga ego ezumike ahụ, ka ọ ghara ịhapụ ịga akwụkwọ maka enweghị ego. .
Anyị kwenyere na ọzụzụ a na-enye na mpaghara nke nwata akwụkwọ ga-adaba adaba maka mkpa ya na mkpa nke ụka dị na mpaghara ya. Anyị ekpebiela, na mgbe ụfọdụ, anyị ga-atụle inye onyinye maka nwanyị iji gaa mba ọzọ.
Anyị nwere mmasị na ọ bụghị naanị ịkwado ụmụ nwanyị n'otu n'otu, kamakwa na-arụ ọrụ na mmekorita ya na ndị otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, iji hụ na e nyere ụmụ nwanyị ọzụzụ kwesịrị ekwesị, nke kachasị mma na oge. Anyị nwere mmasị ịnụ ihe mgbe ọ bụla nke ga - achọ ịtụ aro nwanyị maka ọzụzụ ma ọ bụ nke nwere ike ikwu banyere otu Li Tim Oi Foundation nwere ike isi rụọ ọrụ na mmekorita ya na ndị otu ndị ọzọ iji mee ka ụmụ nwanyị nweta ọzụzụ. Ọ bụrụ na ịmara onye ga-erite uru site na onyinye sitere na Foundation, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụle echiche ọ bụla maka ụzọ iji rụọ ọrụ na mmekorita ya na Li Tim-Oi Foundation, biko ziga Onye isi oche: admin@ltof.og.uk
© 2010-2019 Li Tim-Oi Foundation UK Registered Charity No: 1027837 Ikike niile echekwabara
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki iji mee ka ahụmịhe gị ka mma. Anyị ga-eche na ị dị mma na nke a, ma ị nwere ike ịpụ apụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.NabataJụ GỤKWUO